I-Kildare Maze - IntoKildare
Jabulela usuku lomndeni olunzima noluthokozisayo ngobumnandi obudala obudala ngentengo engabizi. Ngaphandle komoya opholile, umugqa omkhulu kaHeinster omkhulu kakhulu uyindawo enhle emindenini yokujabulela usuku ndawonye.
Inselelo yakho kuHedge Maze ukuthola indlela yakho ngokusebenzisa amahektare ayi-1.5 ethango ahlanganiswe nezindlela eziya embhoshongweni wokubuka enkabeni ye-maze. Nakanjani uzolahleka, kunezindlela ezingaphezu kuka-2km zezindlela futhi uqinisekisiwe ukuthi uzoba nokuzijabulisa okuningi ukuthola indlela yakho. Kusukela embhoshongweni wokubuka jabulela ukubukwa kwepanoramic kuya emaphandleni nasezifundeni ezizungezile noma umane uthokozele ukubuka phezu kwe-maze eveza ukwakheka kwayo. USt Brigid, usanta ongumvikeli kaKildare waba ugqozi lomklamo, oqukethe isiphambano iSt Brigid's esiphakathi kwamaquadrants amane, maphakathi nesiphambano kuyisikhungo se-maze.
I-Wooden Maze iyinselelo yesikhathi ethokozisayo futhi umzila uguqulwa njalo ukukugcina ezinzwaneni zakho!
Futhi kufakwe i-Adventure Trail, Zip Wire, Crazy Golf kanye nezivakashi ezisencane, indawo yokudlala yengane. Ukudla okulula neziphuzo kuyatholakala esitolo esizeni.
Ukubhuka Ku-inthanethi Kubalulekile
Ukuzidela Nemisebenzi, Outdoors, Ubumnandi Bomndeni, Amagugu Afihliwe, Clane
Isifunda iKildare, Ireland.
Izimpelasonto ezivulekile ngoMeyi nangoSepthemba
Izinsuku eziyi-7 uJuni, uJulayi no-Agasti
10 am-1pm Isikhathi noma 2 pm-6pm Iseshini
Ingashintsha, sicela uvakashele ku-www.kildaremaze.com ukuthola eminye imininingwane